Chelmo - Sunplay Dancing Contest စတင်နေပါပြီ
Sunplay Dancing Contest စတင်နေပါပြီ
Sunplay Dancing Contest ကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီနော်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link တွင် လျှောက်လွှာတင်နိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို လျှောက်လွှာ (Entry Page) တွင်လေ့လာ ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။ အကအပြီးတွင်လည်း "Entry Form" Link ကိုနှိပ်ပြီး လျှောက်လွှာ တင်နိုင်တယ်နော်။
၀၁. အသက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၈ နှစ် အတွင်း ယောင်္ကျားလေးနှင့် မိန်းကလေးများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တဦးတည်းသော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်လိုပါက အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် (၂)ယောက်မှ (၅)ယောက်အတွင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
၀၂. Step2တွင် Sunplay မှသတ်မှတ်ထားသော Sunplay Dance ဖြင့်သာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်။ (နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင် K POP Cover Dance, English သီချင်း + Sunplay Dance အက ၂ မျိုးဖြင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်။)
၀၃. အခြားသော အကပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိပြီးသူများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရှိပါ။
၀၄. ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံး ပြိုင်ပွဲကာလတစ်လျောက်ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကို မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်သာ ကျခံရမည်။ ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် အဖွဲ့အစည်းမှ လုံးဝတာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
၀၅. Rohto မိသားစုများ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရှိပါ။
Sunplay Facebook Page တွင်ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာနှင့်ကိုယ်တိုင်(သို့) အဖွဲ့လိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့ဖြင့် လျှောက်လွှာတင်သူများသည် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(၁)ဦးသာ လျှောက်လွှာတင်ရန်။လျှောက်လွှာများထဲမှ ပဏာမပြိုင်ပွဲဝင်များကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်သူများကိုသာ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လဆန်းတွင် ပဏာမရွေးချယ်ထားသူများကို ရန်ကုန်မြို့တွင် လူတွေ့အကကို စစ်ဆေးပြီး နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ရန်အတွက် ဇကာတင်ယောင်္ကျားလေး(၁၀)ဖွဲ့၊ မိန်းကလေး (၁၀)ဖွဲ့ကို ထပ်မံရွေးချယ်ပါမည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်အကမှာ Sunplay Myanmar Page တွင်ဖော်ပြထားသော Sunplay Dance ဖြင့်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင်Sunplay Dance နှင့်အတူ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ KPOP Cover Dance. အင်္ဂလိပ်သီချင်းတို့ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။